वैदेशिक रोजगारी: विशेष कानुन नहुँदा न श्रीमती, न सम्पत्ति ! « Drishti News – Nepalese News Portal
वैदेशिक रोजगारी: विशेष कानुन नहुँदा न श्रीमती, न सम्पत्ति !
देवानी संहिताको लेनदेन महलमा साहु र आसामीको हकमा ऋण लिएको, दिएको, खाएको देखियो भने सावाँब्याज तिराइदिने, सम्पत्ति बन्डा गराइदिने व्यवस्था छ। कानुनअनुसार एकाघरमा श्रीमान् श्रीमती, दाजुभाइको बीचमा भएको सगोलको कारोबारमा ऋणधनको अर्थ लाग्दैन। यसलाई सगोलको सम्पत्ति मानिन्छ।, आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो समाचार छ ।